‘गर या मर’ को अवस्थामा शरदकोे महेन्द्रनगर ! | Hamro Khelkud
‘गर या मर’ को अवस्थामा शरदकोे महेन्द्रनगर !
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) को चौथो दिन आज पनि दुई खेल हुँदै छन् । पहिलो खेलमा सिवाईसी अत्तरिया र रुपन्देही च्यालेन्जर्सबीच प्रतिसप्रर्धा हुने छ । त्यस्तै दोस्रो खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेड र विराटनगर किंग्स खेल्ने छन् । रुपन्देही र अत्तरियाबीचको खेल ९ बजेपछि फाप्ला क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने छ ।
अत्तरिया दिपेन्द्रसिंह ऐरी र रुपन्देही वसन्त रेग्मीको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछन् । पहिलो खेलमा अत्तरियाले धनगढी स्टार्सलाई ५ रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो । रुपन्देहीले सुरुवाती दुइृ खेलमा जित निकालेको छ । आजको खेलमा जित आत्मासात गर्न सके प्ले अफ बलियो बन्ने छ । रुपन्देहीले महेन्द्रनगरलाई २ रनले हराउँदा विराटनगरलाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो । गत वर्ष अत्तरियाले रुपन्देहीलाई ९ विकेटलले हारएको थियो ।
त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा महेन्द्रनगर र विराटनगरबीच दिउँसो १ बजेपछि खेल सुरु हुने छ । शरद भेषवाकर कप्तान रहेका महेन्द्रनगरलाई अघिल्लो चरणको यात्रा कायमै राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ । पहिलो खेलमा रुपन्देहीसँग २ रनले हारेको महेन्द्रनगरले दोस्रो खेलमा काठमाडौंसँग ७ रनले पराजित भएको महेन्द्रनगर आजको खेलमा पराजित भए अघिल्लो चरणको संभावनाा अंकगणीतिय मात्र हुने छ ।
यता करण केसी कप्तान रहेको विराटनगर पहिलो खेलमा रुपन्देहीसँग ५ विकेटले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा धनगढीलाई २१ रनले हराउँदै पहिलो जित निकालेको थियो । गत वर्ष महेन्द्रनगरले विराटनगरलाई ३३ रनले पराजित गरेको थियो ।